बक्यौता रकम नपाएपछि उखु किसान प्रदर्शनमा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
बक्यौता रकम नपाएपछि उखु किसान प्रदर्शनमा
मंसिर २८, २०७७ तस्बिर : केशव थापा
काठमाडौँ — चिनी मिलबाट पाउनुपर्ने बक्यौता रकम नपाएकाे भन्दै सर्लाहीका उखु किसानहरुले प्रदर्शन गरेका छन् । बक्याैता रकम तिर्ने भनेर चिनी मिलले सरकारसँग सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै किसानहरूले आइतबार माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।
उनीहरू 'श्रम, पसिनाकाे मूल्य पाउँ', 'किसानहरू मार्न पाइँदैन' लगायतका विभन्न नारा लेखिएका प्लेकार्डहरू बाेकेर प्रदर्शनमा उपस्थित थिए ।
रकम भुक्तानीको माग गर्दै किसानहरु काठमाडौंमा आन्दोलन गरेपछि मन्त्रालयले २०७६ पुस १८ गते उखु किसानसँग ५ बुदे सम्झैता गरेको थियो । मन्त्रालयले तत्काल भुक्तानीको वातावारण बनाउने, मिल मालिकको सम्पत्ति बिक्री गरेर भए पनि सम्पूर्ण बक्यौता चुक्ता गर्ने आश्वासन दिएको थियो । तर, एक वर्ष बितिसक्दा पनि किसानहरुले अझै उखुको पैसा पाएका छैनन् ।
प्रकाशित : मंसिर २८, २०७७ १३:१४
अख्तियारका पूर्वप्रमुख बस्न्यात विशेष अदालतमा उपस्थित
मंसिर २८, २०७७ कृष्ण ज्ञवाली
काठमाडौँ — सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दामा परेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यात आइतबार विशेष अदालतमा उपस्थित भएका छन् ।
उनको बयान भइरहेको विशेष अदालतका प्रवक्ता एवं उपरजिष्ट्रार पुष्पराज पाण्डेयले बताए ।
बयान सकिएपछि विशेष अदालतले बस्न्यातलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने, धरौटीमा छाड्ने वा सामान्य तारिखमा छाड्नेमध्ये एउटा आदेश दिनेछ । विशेष अदालतका अध्यक्ष प्रेमराज कार्की, सदस्यहरु अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा अहिले बयान चलिरहेको हो ।
– अख्तियारमा बस्न्यातको बयान के थियो ?
– मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय
– के हो ललिता निवास ?
– कसलाई कति बिगो ?
प्रकाशित : मंसिर २८, २०७७ १३:०६